နည်းပြအလုပ်ကိုနည်းစနစ်: ဘယ်လိုသင်၏အသက်တာကိုတိုးတက်စေရန် - အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း
Ina Dolmova စိတ်အားထက်သန်စွာအောင်မြင်သော, ရည်မှန်းချက်ကြီးလူတွေကသူတို့ဘဝကနေလိုခငျြအတိအကျအဘယ်အရာကိုထွက်ရှာရန်ကူညီပေးသည်သူတစ်ဦးအရည်အချင်းပြည့်မီနည်းပြဖြစ်ပါတယ်။
ဂျူလီယာ Jarvis ဘို့ အောင်မြင်မှုပုံပြင်များ Mag:
နည်းပြ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ, လူတွေထင်လမ်းကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း, သိသိသာသာဖြစ်နိုင်သမျှအတိုဆုံးကာလ၌တစ်စုံတစ်ဦးရဲ့ဘဝတိုးတက်ကောင်းမွန်ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်အလုပ်ရပ်လုပ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ လူတစ်ဦးနည်းပြအလုပ်ကိုမှတဆင့်လည်းသူ၏အကျိုးစီးပွားကယ့်ကိုနေ client ရဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်ပါတယ်တဲ့ professional ၏အကူအညီဖြင့်မိမိကိုမိမိဆွေးနွေးရန်နှင့်တညျဆောကျပုံဖို့အခွင့်အလမ်းရရှိသွားတဲ့။
ကြောင်းကိုသူ၏ကိုယ်ပိုင်အောင်မြင်မှုပေါ်တွင်မူတည်သည်ကားအဘယ်သို့, သူ့အလုပ်ပါပဲ။ နည်းပြအလွန်များနှင့်လုံးဝပစ္စုပ္ပန်နှင့်ဖောက်သည်များ၏အနာဂတ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်သောအလေ့အကျင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဟာတိုက်ရိုက်အပြုသဘောဆောင်တဲ့ရလဒ်မှဥပမာ, ဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်မဟုတ်လျှင် One ရဲ့အတိတ်, ဆွေးနွေးမဟုတ်သလိုသို့ delved မပေးပါ။ မိမိတို့ပျော်ရွှင်မှုကိုသို့မဟုတ်မပျော်ရွှင်တာဝန်ရှိသည်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များစေနှင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်လုပ်ရပ်များယူအဖြစ်အပြည့်အဝပေးနိုငျအဖြစ်မှတ်နေကြတယ် - ပြည်သူ့ဘယ်သူကိုမှာ "တစ်ခုခုမှားယွင်းနေသည်" သို့မဟုတ်သူကိုဖွင့်ဆန့်ကျင်ဘက် "ပျက်စီး" ဖြစ်ကြောင်း, ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်မဟုတ်။
ဂရေဟမ် Jarvis ©
နည်းပြမှတစ်ဆင့်သင်သည်များစွာသောအသစ်နှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့လူတွေကခရီးဦးကြိုပြုခြင်း။ လူတွေ၏အဘယျ type ကိုသင်တို့ဆီသို့လှည့်နှင့်သူတို့ပြဿနာများ၏အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုရသလော
ငါနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်လူများကိုအများဆုံးမကြာခဏဒါခေါ် "မြင့်မားတဲ့အဆိုတော်" များမှာ - ရည်မှန်းချက်ကြီး, သူတို့ကိုယ်သူတို့နှင့်၎င်းတို့၏အနာဂတ်အပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့ဆန္ဒရှိနှင့်သူတို့ထိုကဲ့သို့သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထောက်ခံမှုလိုအပ်ဝန်ခံဖို့နဲ့မေးမြန်းဖို့ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိသည့်အခါအမှတ်သို့ရောက်ရှိကြတဲ့သူတွေကို သူတို့လိုချင်တဲ့အဘယ်မှာရနိုင်ရန်အတွက်ကြောင့်ပါ။
အသုံးအများဆုံး "ပြဿနာများ" နေသောခေါင်းစဉ်:
"မိမိကိုယ်ကိုမေတ္တာ" ယုံကြည်မှုနှင့်အလုံအလောက်စစ်မှန်တဲ့၏ 2) မရှိခြင်း
ကျနော်တို့တကယ်ကျနော်တို့ရဲ့အသက်တာ၌ရှိသည်ဖို့ချင်သောအရာများအတွက်အလုံအလောက်လှုံ့ဆျောမှု၏ 4) မရှိခြင်း။
အစစ်အမှန်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၏ 5) မရှိခြင်း,
နည်းပြ၏နိယာမအကွံဉာဏျမရှိတိုက်ရိုက်အပိုင်းအစအစဉ်အဆက်ဖောက်သည်ဖို့ပေးသင့်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သူ / သူမတစ်ဦးအထူးသဖြင့်လယ်ပြင်၌အကွံဉာဏျတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းပေးထားလျှင်ဤနည်းပြ, ဒါပေမယ့်လမ်းညွှန်သင်ပြမထားပါ။ အချို့အောင်မြင်မှုရရှိပေါ်၌တဦးတည်းကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့ဒီအောင်မြင်မှုများအတွက်တာဝန်လုံးဝသူ / ကြှနျမသောအချက်ကိုအပြည့်အဝကိုသတိထားမိသူဖြစ်ရမည်! ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သင်ကဝေးတစျဦးရဲ့ "အတောင်ပံ" ယူနှင့်လူတစ်ဦးထပ်ကာထပ်ကာဒီပြန်လုပ်ရန်အဘို့အခွင့်အလမ်း။ နည်းပြလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့လက်ကိုကိုင်ပြီးအဘို့, ဒါပေမယ့်ဘယ်လောက်တဦးတည်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဆုံးမဩဝါဒပေးဘို့ရည်ရွယ်ခြင်းမရှိပါ။
အတိုချုပ်အောက်ပါချဉ်းကပ်နည်းပြအလုပ်ကိုအတွက်အသုံးပြုသည်: အနည်းပြဖောက်သည်သူ / သူမ၏ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတာ, လိုလားသောအရာကိုရှငျး; အဘယ်ကြောင့်တဦးတည်းကလိုလား; သူ့ကို / သူမ၏ရန်အရေးကြီးပါသည်ကားအဘယ်သို့; ဘယ်လိုအောင်မြင်ရန်, သို့မဟုတ်မ; ဘယ်လိုတဦးတည်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝအပေါ်သက်ရောက်မှုများနှင့်ပတ်လည်ရှိလူတွေ၏ပါလိမ့်မယ်။
သင်သည်ထိုသူတို့နှင့်အတူတစ်ဦး session တစ်ခုအပြီးသင့်ရဲ့ဖောက်သည်များအတွက်အပြုသဘောအပြောင်းအလဲများကိုတွေ့မြင်ပါသလား
ဤသူကားငါ၏အလုပ်ဖြစ်ပြီး, ငါဒီလိုအပြောင်းအလဲတွေမမြင်ရခဲ့ပါလျှင်, အကြှနျုပျအဘို့အခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့်သင်ကပြတ်သားဆုံးဖြတ်ချက်သို့မဟုတ်အရာတစ်ခုခုကိုဖြစ်ပျက်နှင့်သင်ပြန်ကြည့်ရှုဘယ်တော့မှလုပ်မယ့်ဒုတိယယူသည့်အခါ, သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝ၌ခဏသတိရပါ။ ဘဝအပြောင်းအလဲအတွက်မရှိသလောက်နှေးကွေးခြင်းနှင့်နာကျင်ဖြစ်စဉ်ကိုအဖြစ်တွေ့ကြုံတတ်၏။ ဒါဟာအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်သည့်အခါယင်းအစား, ကလုနီးပါးအရေးတကြီး, ချက်ချင်းဖြစ်လာတယ်။ သငျသညျအနှစျတရာတစ်ခုခုကိုအဘို့အဆင်သင့်ရတဲ့ခဲ့ကြပေမည်, သင်ထပ်ခါထပ်ခါပြုလုပ်ထင်ပြီ, သငျသညျကိုအံ့ဩကြနှင့်သင့်စိတ်ကို 100 ကြိမ်ပြောင်းလဲခဲ့ကြပေမယ့်ပြောင်းလဲမှုကိုကြွလာသောအခါ, ဒါကြောင့် "ကိုယ့်" တွေ့ကြုံတတ်၏။
ငါကအရမ်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအခက်အခဲများကနေလူ့အဖွဲ့အစည်းကိုအားဖြင့်ချမှတ်ထားသည့်မျှော်လင့်ချက်များကနေ, ငါ့အလုပ်ကနေကုန်သောအခါဤသို့ပြုစတင်ခဲ့သည်။ ပြင်ပကနေမြင်အရမ်းအောငျမွငျခဲ့ပေမယ့်ကျွန်မကိုယ့်ကိုကိုယ်ငါဒါအောင်မြင်သောခဲ့ဘာဖြစ်လို့၏အယူအဆဆုံးရှုံးခဲ့အတွင်းပိုင်း။ ဒါဟာစိတ်ပျက်စရာငါသတိရသောခါးသောအဆုံးခဲ့ကြောင်းငါ့ကိုအစီအမံယူ ... နည်းပြအလုပ်ကိုတက်ယူလုပ်! ပေါ်ခဏ မှစ. ငါ့အသက်ကိုငါအခြေခံကျကျပြောင်းလဲပြီ။
ယခုငါနည်းပြနဲ့ကျွန်မနေ့တိုင်း, လုံးဝအရာအားလုံးထဲမှာအတူအလုပ်လုပ်သောအခြားနည်းစနစ်သုံး! တက်လာပြီမှစတင်ကာနှင့်မည်သို့ငါအဓိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဏ်ထဲမှာဖြစ်ကြောင်းကိုသောအခါငါတစ်အစည်းအဝေးတွင်မပြောတတ်, ဒါမှမဟုတ်ကျွန်မရဲ့ကိုယ်ပိုင်သံသယနှင့်စိုးရိမ်မှုများကိုပြုမူဆက်ဆံဘယ်လောက်ဘယ်လောက်ငါ့နေ့ကစီစဉ်ထားသည်။
သင်တစ်ဦးရည်မှန်းချက်ကြီးသူတစ်ဦးပါပဲ။ သင်ဘယ်လိုရလဒ်တွေကိုစသင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုဖွင့်ကြဘူး - အလုပ်ကြိုးစားမှုမှတဆင့်အလိုဆန္ဒ, ဒါမှမဟုတ်ပဲအာရုံစိုက်ဖြစ်ခြင်းများနှင့်အမှုအရာမိမိတို့ကိုယ်ကိုအားဖြင့်ဖြစ်ပျက်ခွင့်သည်။
ဒီတော့ဝေးကအလုပ်နှင့်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေအများကြီးမှတဆင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ငါအမှုအရာမှပိုမိုအခန်းထဲမှာစွန့်ခွာဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူနေပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ "ဒါဝေး" ဆိုသညျကား "ကိုယ့်ဖြစ်ပျက်။ " ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာ၌ဖြစ်ပျက်သောအရာတို့ကိုများ၏အများစုကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထားတွေနဲ့ယုံကြည်ချက်အားဖြင့်နှုတ်တိုက်ချပေးခဲ့တာနေကြသည်။
ဒါကြောင့်ယခုအချိန်အထိကျွန်မအောင်မြင်မှုသာအလွန်ခက်ခဲလုပ်ဆောင်သောအားဖြင့်အောင်မြင်နိုင်ပါသည်ဟုယုံကြည်ကြပါပြီ, သို့သော်ဤသေချာပေါက်မမှန်ပါဘူးပါ! သို့သော်ကျွန်မမဆိုအောင်မြင်မှုအလုပ်သို့တိုက်ရိုက်အချိုးကျထွက်ယူသွားတတ်၏, ငါအမြဲကိုယ့်ကိုယ်ကို ပို. ပို. အလုပ်၏မျှော်လင့်ချက်များလိမ့်မည်သကဲ့သို့ငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ်ဦးကျြောလှားနိုငျအတားအဆီး setting ငါပေမယ့်တစ်ရက်သာ 24 နာရီရှိကြောင်းဆိုလိုမယ်လို့ယုံကြည်ဖို့တည်လျှင် ငါနောက်ဆုံးမှာ "ဖြစ်နိုင်သမျှ ပို. ပို. အလုပ်" ၏ကန့်သတ်မှုကိုရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်တဲ့သူမှသာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးပေါ့။
Ina Dolmova အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ:
Facebook ပေါ်မှာ Ina Dolmova
အာရှခန့် Hitchhiking - Roving ခရု
မီးရထားတှဲ, တကယ်ကိုလှုံဆော်အားပေးပုံပြင်များ, လူ, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနည်းပြ | | rating:5/ 30